Cnc Part Oem, faritra metaly takelaka, faritra ilaina amin'ny milina - Daohong
Fitaovana ivelan'ny varavarana
Reel diive 50mm
Reel Diving Type vaovao
Screw momba ny onja
3mm Adidy mavesatra
Milanja baolina mitondra
Milomano manjono vy
Fehiloha tanana Reel Fishing
CNC Precision milina mandeha ho azy Machining
Fitaovana milina manokana
Fitaovana milina miasa amin'ny hazo
Fitaovana milina fambolena
Fizarana mandeha ho azy
Serivisy amin'ny faritra CNC
Fitotoana Vary Serivisy
Serivisy momba ny milina & fanodinana
Tongasoa eto Daohong - Machining CNC, manodina sy manodina faritra any Sina.
Ny orinasa dia mifantoka amin'ny R&D, famokarana sy fivarotana vokatra amina faritra lehibe telo, ao anatin'izany ny faritra vy matihanina One-stop toy ny serivisy amin'ny faritra CNC, ny serivisy amin'ny milina, ny serivisy ary ny serivisy amin'ny faritra ampitaina, ny faritra ivelany toy ny leash surf, ny swivel swivel swivel ary ny kojakoja fitetezana surf hafa sy kojakoja Elektronika ho an'ny mpanjifa toy ny TV mount, latabatra mijoro.
Miaraka amin'ny iraka kalitao dia ny fiainantsika manome vahaolana vokatra namboarina izay mahasambatra ny mpampiasa ”.
Miaraka amin'ny iraka kalitao dia ny fiainantsika manome vahaolana vokatra namboarina izay mahasambatra ny mpampiasa
Fizarana mafana mivarotra
Serivisy amin'ny varavarana ivelan'ny varavarana
Serivisy momba ny milina
Fitsidihana adidy mavesatra
2.Size 38mm, 45mm Na namboarina
3.Color afaka namboarina
Reel antsitrika 15m sy 30m
1.Our ny vokatra dia napetraka iray manontolo, 15m / 30m / 45m / 50m na ​​tsipika fisaka halavany manokana, tsipika boribory 0.5m.
2.Aluminum firaka mihodina.
3,816 fihodinana vy tsy misy fangarony.
4.316 vy vy hook 90mm, boaty plastika.
SUP Legrope mahitsy
1.Manana karazana style fonosana ho an'ny safidinao izahay.
2.Ny haben'ny fonosana, ny fonosana, ny fomba famonosana.
3.Ny fonosana fanontana rehetra dia mety ho fanao.
1.CORE: TPU Polyurethane fitaovana ho an'ny surfboard leash, tanjaka avo, elastika tsara ary faritra mamiratra.
2.CUFF: ny kitrokely amin'ny fehikibo SUP dia vita amin'ny fitaovana neoprene malemy malemy, tena mahazo aina.
3.SWIVEL: Namboarina niaraka tamin'ny voninkazo vy vita amin'ny doulbe.
4.RAIL SAVER: Ny mpanamory fiaramanidina mavesatra dia mampiditra ny tadiny amin'ny solaitrabe.
Sifatra sy zana-pandrefesana ho an'ny milina fambolena
1.Our tsorakazo ampiasaina amin'ny boaty gear, milina fambolena, milina fanontana, milina lamba, milina fanangonana
Fanohanana ara-teknika 2.Professional;
3.OEM & ODM fanohanana;
Matoky ianao fa ho tsara toetra ny faritra misy vidiny mahafinaritra be dia be.
Custom Shaft faritra
Ekipa marketing 1.Professional ho an'ny sary sy santionan'ny mpanjifa
2.Mihoatra ny traikefa amin'ny orinasa 10taona amin'ny paompy
Ekipa marketing 3.Professional ho an'ny sary sy santionan'ny mpanjifa
4.OEM & ODM fanohanana;
1.Fivarotana mivantana mivantana
3. fandeferana avo lenta (ny fandeferana kely indrindra dia mety hahatratra: +/- 0.001mm)
Hazo vy ...
1.We afaka manapaka ny halavan'ny hazo ilainao.
2.We dia afaka manome fepetra takiana manokana amin'ny faran'ny hazo.
3.We dia afaka manome serivisy namboarina ny savaivony ny hazo.
1. Varotra mivantana amin'ny orinasa
2. Fanohanana ara-teknika matihanina;
4. Fanohanana OEM & ODM;
5. Matokia fa ho tianao ny faritra misy kalitao tsara miaraka amin'ny vidiny mahafinaritra be dia be.
Filalaovana fihodinana jono vaovao
Hery matanjaka sy fihodinan'ny 360 degre tsara
1. Heavy Dive Stainless Steel Swivels
2.Tsy misy hadisoana na familiana olana
3. Mety amin'ny hetsika ivelany toy ny antsitrika, surf, mitaingina, fiakarana, Garden Hanging Basket sns
Fis 3-way avo lenta ...
1.Tena mahery sy fihodinan'ny 360 degre
3.Tsy misy hadisoana na familiana olana
4. Mety amin'ny hetsika ivelany toy ny antsitrika, surf, mitaingina, fiakarana, Garden Hanging Basket sns
Fizarana fihodinan'ny jono
SIPA FITSIN'NY RINGA TSY MISY
1.Manana swivel ho an'ny fampiharana fanjonoana varotra rehetra izahay.
2.Ny karazana fanjonoana mpanjono dia misy fa tsy voafetra amin'ny swivels mitarika, karazana 8, mihodina, boaty, crane, sampana ary swivels mavesatra andraikitra 8.
Fanjonoana mitana baolina S ...
1. Heavy Duty 316 Stainless Steel Swivels
3.Weight dia 6.5 grama, fitsapana 880lb
5.Materialy: 316 Stainless Steel; varahina
316 vy vy ...
- Voninkazo matevina matevina
- Tsy misy olana mahadiso na manodinkodina
Ambongadiny avo lenta ...
1, fihodinan'ny baolina
2, habe: amin'ny requst 3.5mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10.5mm 12mm
Miaraka aminay soa aman-tsara ny VOLAO, ny BUSINESS-nao amin'ny azo antoka.
Fifanarahana fiantohana ara-barotra sy fihenam-bidy 5% ho an'ny herinandro fanaterana tara ny herinandro. Hotely maimaim-poana mandritra ny fitsidihanay ny orinasanay 【NINGBO-JIANGSU】
Fanoloran-tena tsy misy dikany amin'ny kalitao. Afaka manatona anay mora foana ianao amin'ny fotoana rehetra = >> 24 ora misy amin'ny Internet
Ny teknolojika sy ny volavolanao dia afaka arovan'ny NDA. Vahaolana tokana ho an'ny filanao fanamboarana vy
Ny fanontanianao dia azo tsoahina ao anatin'ny 6 ora. Fanaovana santionany haingana ao anatin'ny 7 andro
Mampanantena ny vidiny mirary indrindra amin'ny kalitao avo lenta izahay. Rafitra QC tonga lafatra mandritra ny fizotrany rehetra
Kalitao & fanaraha-maso
Manana injenierie Quotation 3 izahay ary manana traikefa miasa mihoatra ny 6 taona ho an'ny mpanjifa vahiny. Afaka misafidy dingana mety amin'ny mpanjifanay izy ireo. Ny mpanjifanay dia afaka mahazo ny teny nindraminay tao anatin'ny roa andro.
Ny injenieran'ny teknisiana dia manana traikefa asa mihoatra ny 5 taona, afaka manao sary 2D ofisialy sy sary 3D araka ny santionan'ny mpanjifa sy ny heviny. Ny hevitrao + DAOHONG = Vokatra
Tatitry ny fitsaboana hafanana
Tatitra momba ny fanadihadiana
Araka ny fantatsika fa ny faritra vy dia be mpampiasa eo amin'ny tontolontsika. Manodidina ny 10 taona mahery ny traikefa amin'ny famokarana vy, ny ekipanay R&D dia efa namolavola ny marika anay miaraka amin'ireo vonona vonona hitafy tsipika. Toy ny faritra onja; Miakatra ny TV Wall; ary mijoro ...
Ningbo Daohong Machine Co., Ltd. dia nifindra tamin'ny toerana vaovao tao amin'ny distrikan'i Ningbo yuyao nanomboka ny 25 Aogositra 2020. Ny habaky ny atrikasa vaovao dia lehibe kokoa noho ny teo aloha, ary ny toe-javatra miasa dia tsara kokoa, ny tena zava-dehibe dia ny machining c ...